#Ciidan gaaraya 10,000 oo lagu wareejinayo Amaanka Magaalada Muqdisho | Get Latest News From Horn of Africa
#Ciidan gaaraya 10,000 oo lagu wareejinayo Amaanka Magaalada Muqdisho
By Wanaag On Jan 3, 2019 Last updated Mar 31, 2019
Ciidamo cusub oo Boolis ah ayaa maalmaha soo socda lagu wareejin doonaa ammaanka Magaalada Muqdisho, Sida ay sheegeen Saraakiisha Ciidamada Booliska Somaliya.
Ciidamada lagu wareejinaayo ammaanka Magaalada ayaa la soo saari doonaa 10 cisho kadib, iyadoo hadda tababar uu uga socdo Xarunta Xisbiga oo xarun Ciidan u ah Booliska dowladda.
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa kormeeray cutubyo cusub oo ka mid noqoyana Ciidanka Booliska Soomaaliyeed kuwaas oo tababar uu uga socdo garoonka ciyaaraha ee Muqdisho.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in laga sugayo kumannaankan dhallinyarada ah ee u istaagay dalkooda, in ay wax badan ka badelaan amniga magaalooyinka dalka, gaar ahaan Caasimadda Muqdisho oo waajib gaar ah uu ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah.
“Cadawgeennu waxa ay Muqdisho u bartilmaameed sanayaan waa maqaamka iyo maamuska ay ku leedahay caalamka, Alshabaab waxa ay cududdooda oo dhan isugu geeyeen sida ay u wax yeelayn lahaayeen Caasimadda shacabka Soomaaliyeed, balse taas uma suurta galeyso inta ay dalkan ku nool yihiin dhallinyaro idinkoo kale ah oo shafka u dhiganaya ilaalinta xasilloonida, nafta iyo hantida shacabkeenna.”
Bashiir Ameeriko Taliyaha Ciidamada Booliska Dowladda Federalka Somaliya ayaa tilmaamay in Ciidanka ay gaarayaan 1,000 askari oo tababar wanaagsan soo qaatay.
Dhankooda, dhallinyarada uu la kulmay Guddoomiyuhu ayaa soo bandhigay noocyada tababarka ay qaateen iyo himilladooda ku aaddan sugidda amniga Caasimadda, iyagoona Maamulka Gobolka Banaadir uga mahadceliyey booqashadan oo ka tarjumaysa sida Guddoonka Gobolku ay u garab taagen yihiin hay’adaha ammaanka.
Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa hadda si guud waxaa gacanta ugu haya Ciidamada Booliska oo ka hawlgala Degmooyinka Gobolka Banaadir.